Vaovao - Surfboard elektrika Mankeel W7 natomboka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny vanin-taonan'ny varotra fahavaratra amin'ny taona 2022
Amin'ny maha-orinasa teknolojia manavao azy, mifototra amin'ny traikefa voaangona ao amin'ny indostrian'ny scooter elektrika, dia nanavao sy namolavola birao mitsingevana elektrika hafa izahay tamin'ny taon-dasa izay mitondra fahafinaretana bebe kokoa ho an'ny olona ---- Mankeel Electric Surfboard W7.
Mankeel W7 dia mampiasa endrika vaovao mitambatra, maivana sy kely bika, malefaka ambonin'ny izay mifanaraka amin'ny ambonin'ny rano, mahatonga azy hifindra tsara ao anaty rano, mety ihany koa ny hitondra, ny antsitrika lalina dia hatramin'ny 50m, mamela anao hankafy tanteraka ny isan-karazany. toerana ambanin'ny rano. Maimaim-poana ny mitsambikina amin'ny tontolon'ny rano na dia tsy mahay milomano aza ianao.
Ny faharetan'ny bateria lava aorian'ny fiampangana feno dia hatramin'ny 60 minitra, ary ny famolavolana bateria azo esorina IP68 feno rano dia mety amin'ny fanoloana ny bateria na ny famerenam-bola azy.
Kitiho ny horonan-tsary etsy ambany raha hijery ireo fotoana fialamboly rano W7
Ity horonantsary ity dia fanehoan-kevitra amin'ny horonantsary fitsapana anaty rano avy amin'ny mpanjifa Rosiana iray. Ny mpanjifanay ihany koa dia nanao fanavaozana kely mifototra amin'ny loko tany am-boalohany ary nandoko ny solaitrabe mitsingevana ho loko tena mangatsiatsiaka. raha manana endrika endrika loko hafa ianao, izahay, amin'ny maha-orinasa matihanina azy, dia afaka manao izany ho anao koa.
Ho vita tsy ho ela amin'ny fomba ofisialy ny andiany voalohany amin'ny vokatra vaovao amin'ity solaitrabe elektrika ity ary havoaka hamidy, hanomanana ny fivarotana amin'ny fahavaratra amin'ny taona ho avy 2022. Ny andiany voalohany amin'izao fotoana izao dia 300 monja. Tongasoa eto amin'ny fifandraisana aminay hametraka baiko.